फोक्सोको क्यान्सर हुनबाट यसरी जोगिनुहोस् | Hamro Doctor News
शनिबार, १५ कात्तिक २०७७ /
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १३५७ जना कोरोना संक्रमित
देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३८ हजारभन्दा धेरै, १ लाख ३१ हजारभन्दा बढी स्वस्थ
नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९ सय ३७ पुग्यो
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ७० हजार नाघ्यो
कोरोना भाइरसको संक्रमणले मानिसको सुन्ने शक्ति गुम्ने खतरा !
फोक्सोको क्यान्सर हुनबाट यसरी जोगिनुहोस्
By सर्मिला थापा
पुरुषमा बढी मात्रामा देखिने फोक्सोको क्यान्सर केही वर्ष यता निकै बढेको देखिन्छ । किन यसरी बढिरहेका छन् फोक्सोको क्यान्सरका बिरामी ? यसबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदिप श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी :-
फोक्सो शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । यसले शरीरलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन लिने र अनावश्यक कार्बनडाइ अक्साईड बाहिर फ्याल्ने गर्छ । फोक्सोको भित्री भागमा रहेका कोषहरुको जीनमा म्युटेसन भएर कोषहरु अनियन्त्रित रुपमा वृद्धि हुनुलाई नै फोक्सोको क्यान्सर भनिन्छ ।
महिलामा पाठेघरको क्यान्सर बढी देखिए जस्तै पुरुषमा तुलानात्मक रुपमा फोक्सोको क्यान्सर बढी देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल क्यान्सरका बिरामी मध्ये १५ देखि २० प्रतिशत क्यान्सर फोक्सोको हुने गरेको छ ।
फोक्सोको क्यान्सर हुने प्रमुख कारण धुम्रपान नै हो । नेपालको सन्दर्भमा महिलाको तुलानामा पुरुषमा फोक्सोको क्यान्सर देखिने प्रमुख कारण महिलाले भन्दा पुरुषले धु्रमपान बढी गर्नु हो । यसबाहेक अन्य कारण यसप्रकार छन् ः—
धुँवाधुँलोमा बढी समय काम गर्नु ।
प्रदुषित वातावरण ।
आगोमा खाना बनाउँदा त्यसबाट निस्किने धुँवा ।
ईट्टा, ढुंगा, माटो वा धुँलो निस्कने उद्योगमा लामो समय काम गर्नु ।
फोक्सोको क्यान्सरका लक्षणहरु निकै ढिला मात्रमा देखा पर्छ । सुरुवाती अवस्थामै लक्षण देखा नपर्दा बिरामी निकै ढिला अस्पताल पुग्छन् । त्यती बेला बिरामीको अवस्था निकै कमजोर भइसकेको हुन्छ ।
साथै यसका लक्षणहरु क्षयरोगको लक्षणसँग पनि मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले फोक्सोकै क्यान्सर भएको हो भनेर एकिन गर्न स्वास्थ परीक्षण नै गर्नु पर्छ । सामान्यतया यस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लाग्ने ।
श्वास फेर्न गाह्रो हुने ।
स्वर परिवर्तन हुने ।
तौल घट्ने ।
खकारमा रगत देखा पर्ने ।
निकै ढिला भए क्यान्सर अन्य अंगमा पनि फैलने ।
खाना मन नलाग्ने ।
फोक्सोमा क्यान्सर भएको सुरुवाती चरणमै थाहा भए पूर्ण निको पार्न सकिन्छ । तर क्रोनिक भइसकेको अवस्था भए बिरामी बचाउन निकै गाह्रो हुन्छ । यसको उपचार पद्धतिमा रेडियोथेरापी र सर्जरीलाई प्रथामिता दिइन्छ । यी बाहेक पनि जुन उपचार पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्ने हो, विशेषज्ञले निर्कोल गरि सोही पद्धति अपनाइन्छ ।
फोक्सोको क्यान्सरबाट बच्ने सबै भन्दा उत्तर उपाय भनेकै धुम्रपान, मध्यपान नगर्नु नै हो । फेरी धुम्रपान, मध्यपान नगर्नेलाई फोक्सोको क्यान्सर नै हुँदैन् भन्ने होइन । तर एकदमै न्यून मात्र हुन्छ । यसको साथै सम्भव भएसम्म धुँवा धुँलोबाट बच्ने, धुँवाधुँलो भएको स्थानमा नियमित काम गर्नु पर्ने भए पनि विशेष सावधानी अपनाउने । सन्तुलित खाना खाने, नियमित व्यायम गर्ने, नियमति स्वास्थ परीक्षण गराउने ।
Last modified on 2019-01-17 19:17:20
बच्चालाई हुने डाउन सिन्ड्रोम के हो ?
स्तन क्यान्सरपछि गरिने ब्रेस्ट रीकन्स्ट्रक्सन के हो ?
दशैँमा टीका थाप्दा र पिङ खेल्दा विचार गरौँ, कोरोना उपहार बन्ला
कोरोना संक्रमितले दशैंमा खानपान गर्दा के-के ध्यान पुर्याउने ?
Dr. Sudip Shrestha
औषधि पसल तथा व्यवसायी प्रमाणपत्र नविकरणमा लाग्ने बिलम्ब सेवा शुल्क मिनाहा गरिने
जनस्वास्थ्य निरिक्षक तोक्दा स्वास्थ्य विज्ञान विषयमा स्नातक तह पुरा गरेको व्यक्ति मात्रै तोक्न निर्देशन
भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत गाेरखाकी १९ वर्षीया युवतीकाे काेराेना संक्रमणका कारण मृत्यु
गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको लापरबाहीले शिशुको मृत्यु भएको भन्दै छानबिन गर्न माग
दशैंमा मासुको सेवनः कस्ता बिरामीको लागि मासु विष बनिदिन्छ ?
जिब्रोमा क्यान्सर किन हुन्छ ?- डा. सुवास घिमिरे
दश वर्षअघि नै थाहा पाउन सकिन्छ पाठेघरको मुखको क्यान्सर
Samples Tested - १४,४३,३४३